भरतपुर सामुहिक आत्महत्या काण्ड: चुकुल लगाउने र भित्र पस्ने दुबै पक्ष मिडियामा – Rastriyapatrika
भरतपुर सामुहिक आत्महत्या काण्ड: चुकुल लगाउने र भित्र पस्ने दुबै पक्ष मिडियामा
गत साता चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१८ शशीनगरस्थित एकै परिवारका तीन जनाले आत्महत्या गरेका थिए। ३४ वर्षीया माया आलेमगर र उनका दुई सन्तानले सलमा पासो लगाएर आत्महत्या गरेका हुन्।मृतक माया आलेमगरको श्रीमान नरवहादुर आले मगर नेपाली सेनामा कार्यरत छन्। उनी विदा हुँदा मात्रै घर आउने गर्थे। उनी विदा सकेर पुन काममा फर्किएको केहि दिनपछि यस्तो घटना घटेको हो।
घटनाको एक प्रत्यक्षदर्शी भन्छिन, ‘हामीले घटना घटेको विहान ७ बजे थाहाँपायौ। ढोकासबै लगाएको थियो। झ्यालबाट हेर्दा ३ जानै एकैठाउँमा झुन्डिएको शव देख्यौ। खबर पाएपछि श्रीमान आएर प्रहरीको सहायतामा शव निकालियो।’
तर त्यतिकै तीन तीन जनाले ज्यान फाल्दैनन्। यो घटना कसैको हात अवस्य छ, विस्तारै दोषी फैला पर्दैछ! यो नयाँ भिडियो हेर्नुस, यहाबीट पनि को दोषी भन्ने कुरा पत्ता लागिसक्यो! आफ्नै चिनजान नाताका मान्छेगरूले लपकाएर राखेको रहैछ वास्तविक! भिडियो हेर्दै जानुस